Joyina iqela kwi-Element Society (iphepha lethu lemisebenzi) (iquka imisebenzi ye-NCS)
Ngaba uthanda ukusebenzisana nabantu abatsha kwaye ubona bafezekisa ukungakholeki? Emva koko ufake isicelo sokujoyina iqela lethu!
Xa usebenza kwi-Element Society unceda abantu abatsha bafezekise ukungakholwanga, uya kubaxhobisa abantu abatsha ukuba batshintshe uluntu lwabo, baphakamise zabo iimfuno baze babe ngumzekelo kubo.
Umbutho we-Element ubhaliso olubhaliswe (inombolo: 1157932), inkampani ebhalisiweyo inqunywe ngesiqinisekiso (inombolo: 08576383) kunye nomboneleli wokufunda obhalisiweyo (UKPRN: 10047367).
Umbutho we-Element uzibophelele ekukhuseleni abantwana nabaselula.
Umbutho we-Element ngumlingani olinganayo nomqeshi.
Ngaba unabantu abantu abanomdla wokwenza umehluko?
Amava e-NCS aguqula ubomi ayengeke kwenzeke ngaphandle komsebenzi onzima wootitshala bethu bokunikezela ngokukhuthazayo.
Unokuba yinxalenye yale ntshukumo yentsha ecacileyo. Abasebenzi bethu bexesha lonyaka basentliziyweni ye-NCS, kwaye siyaziqhenya ngamawaka abantu abakhuthazayo, abakhokelayo nokukhuthaza abantu abatsha kwihambo yabo ye-NCS. Impumelelo ye-NCS yayingeke kwenzeke ngaphandle komnqweno nokuzinikezela kweqela lethu labasebenzi be-NCS.
Ukuba unomdla kule nxalenye yale mivuzo nceda ukhupha amaxwebhu angezantsi uze uthumele ifom yefom yesicelo kwiqela lethu le-NCS kwi - ncs@elementsociety.co.uk
Ifom yesicelo seJob
ZONKE IZIMPILO ZONYAKA
Sifuna ukusebenzisana nabantu abanomdla wokuxhasa abantu abaselula ukuba bafezekise.